Fitetezam-bilaogy Kenyanina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2019 3:35 GMT
- Scentiments miresaka zavatra izay matetika resahin'ny bilaogera kenyanina maro any am-pielezana – manina an'i Kenya.
Tsy izany angamba no nokasain'ny mpanolotra ny AGOA (Africa Growth and Opportunity Act) hojerena. Toy izany ihany koa amin'ny alalan'i Bankelele, manana fisafidianana vaovao amin'izao fotoana izao ny mpitia boky any Nairobi .
-Mitarika fanadihadiana siantifika momba ny “just friends” (mpinamana fotsiny) i Mpisaina (Thinker).
-Manoratra sy mitaona i Wg-K ho an'izay tia mieritreritra hoe ny fanararaotana ara-nofo sy ny fampijaliana ankizy any Kenya dia niainga irery ihany avy any “Andrefana” sy ny ” Aterineto tsivalahara” mba hifoha amin'izay ary hifoka ny kafe. Afa-manome antoka anareo aho fa efa niaina toejavatra mitovitovy amin'izany na mahafantatra olona efa niaina izany toejavatra izany ny ankamaroan'ny Kenyanina vehivavy rehetra izay namaky ity lahatsoratra ity.
-Adrian miresaka fifaninanana oliravina any am-ponja manome vintam-piainana faharoa ho an'ny vehivavy.
-“Avelao ny gazety!” [aza kitihina] hoy Afromusing.
-Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra, avy amin'ny iray tonga vao haingana indrindra ao amin'ny bilaogy, manana lahatsoratra mahafinaritra tamin'ny famakiana ny [bokin'i] Binyavinga Wainaina ny ao amin'ny Diary of a Mad Kenyan Woman.